Manga (maniry) - Wikipedia
Ny manga dia zavamaniry, hazo fihinam-boa volena maro any amin' ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany mba hahazoana voany maro rantsana, misy voany be nofony. Ny anarany ara-tsiansa dia Mangifera indica L.
Manga maniry an-tanàn-dehibe ao La Réunion
Ny manga azo mety mahatratra hahabo 25 hatramin' ny 40 m, ny savaivony dia mety mahatratra 10 m hatramin' ny 20 m eo ho eo ny savaivo azo alofany. Mety mahatratra 300 taona ny manga ary mbola mety mamokatra foana izy amin' izany taonany izany. Ny fakan' ny manga dia mety midina 6 m any amban' ny tany. Maintso ny lokon' ny raviny izay manana halava 15 hatramin' ny 35 sm, sy ambainy 6 hatramin'ny 16 sm.
Hazo avy any amin' ny faritra atsinana any India sy avy any Birmania ny manga. Nampidirin' ny Arabo tao Afrika ary nampidirin' ny Pôrtogey tao Brezily ny manga tamin' ny taonjato faha-16. Volena betsaka any amin' ireo firenena manana toetanin-jana-pehin-tany ny manga nanomboka tamin' ny taonjato faha-17, indrindra tao Afrika, tao La Réunion, tao Maorisy, tao Seisely, tany Antilia ary tany Brezily.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Manga_(maniry)&oldid=999066"
Dernière modification le 18 Desambra 2020, à 11:50
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2020 amin'ny 11:50 ity pejy ity.